Atariishada caanka ah ee Nollywood Genevieve Nnaji ayaa shaaca ka qaaday sababta ay wali ugu guur la’dahay 41 - teles relay
Aktarka caanka ah ee Nollywood Genevieve Nnaji ayaa shaaca ka qaaday sababta ay wali ugu kaliftay inay tahay 41 jir
Sharciga NovelasDADKA & NOLOSHA
By bryanekobe Last updated Agoosto 27, 2020
Atariishada caanka ah ee Nollywood iyo soo saare Genevieve Nnaji ayaa shaaca ka qaaday sababta ay wali u tahay doob iyo waxa iyada ugu baqaya guurka.
Xiddiga reer Nigeria wali ma guursan, laakiin wuxuu leeyahay gabadh yar oo qurux badan oo dhawaan guursatay. Wareysi ay bixisay sida ay qortay ghgossip, Aktarada ayaa shaaca ka qaaday sababta ay uga baqeyso guurka. Genevieve Nnaji waxay ka baqeysaa guuldarada guurkeeda, oo aysan rabin, sidaa darteed waxay dooratay inay ahaato mid aan guursan.
Novelas: EL DIABLO EPISODE 74 IN FRENCH Diablo Waxay Rabtaa Aargudasho for
Nolosha: Duurjoogta - Qeybta 41 • VF -…
“Haddii aan guursado, runtii waxaan doonayaa inaan ku sii jiro guurka, oo ku sii jirista guurka ma ahan wax fudud. Waxay ka dhigan tahay inaad si buuxda ula jaanqaadayso lammaanahaaga, ayay tidhi.
"Waxay ka dhigan tahay inaad heshay naftaada saaxiibka oo waxaad u baahan doontaa inaad u adkaysato niyadjab badan oo hubaal ah inay dhici doonaan, laakiin sidoo kale waa inaad barataa sida loo cafiyo," ayay raacisay.
atariishada caanka ah ee nollywoodGenevieve Nnajiwaxay muujineysaa sababta ay wali ugu guursan la'dahay 41
Regina Daniels aroos cad - Video
Matin Bonheur by RTI 1 laga bilaabo Sebtember 20, 2014 oo ay la socoto Mariam Coulibaly - qaybta 1 - Video
Novelas: EL DIABLO EPISODE 74 IN FRENCH Diablo wuxuu rabaa aargudashada Hiero -…
Novelas: Duurjoogta - Qeybta 41 • VF - Video